Barcelona Oo Liverpool Ugu Hambalyaysay Guushii Champions League Iyo Kooxda Koobka Laga Wareejiyay Ee Real Madrid Oo Ka Quustay. - Gool24.Net
Barcelona Oo Liverpool Ugu Hambalyaysay Guushii Champions League Iyo Kooxda Koobka Laga Wareejiyay Ee Real Madrid Oo Ka Quustay.
June 2, 2019 Mahamoud Batalaale
Kooxda Barcelona ayaa Liverpool ugu hambalyaysay guushii ay xalay ka gaadhay finalkii UEFA Champions League laakiin Real Madrid oo ahayd kooxda koobka laga soo wareejiyay ayaan wax hambalyo ah u dirin Reds.
Liverpool ayaa xalay ku guulaysatay koobkeedii 6 aad ee Champions League waxayna kali ku noqotay kaalinta saddexaad ee kooxaha abid ugu guulaha badan Champions Leauge waxaana hadda ka horeeya Real Madrid (13) iyo AC Milan (7).
Real Madrid ayaa koobka UEFA Champions League soo haysatay 1099 maalmood kaas oo ah rekoodh cusub oo ay kooxaha Yurub u udhigtay waana muddo ku siman saddexdii xili ciyaareed ee ay hore u soo difaacdeen koobka iyo intii la soo gaadhayay finalkii xalay.
Inkasta oo ay Real Madrid barteeda twitterka ku sheegtay in ay 1099 maalmood koobka Champions League soo haysteen isla markaana la soo gaadhay waqtigii uu rekoodhkani soo dhamaanayay, haddana markii ay Reds koobka la wareegtay ayana Real Madrid hambalyo dirin.
Balse taas badalkeeda kooxda Barcelona oo la ogaa qalbi jabkii ay kala kulantay guuldaradii Liverpool ee afar dhamaadkii Champions League ayaa barteeda twitterka hambalyo ugu dirtay Liverpool.
Hambalyada ay Barcelona u dirtay Liverpool waxaa la soo raaciyay sawirka Mohamed Salah iyo Lionel Messi oo isku salaamaya kulamadii ay soo wada ciyaareen.
Waxaana qoraalka hambalyada lagu yidhi: “Hambalyo Liverpool in aad ku guulaysateen koob kale oo Champions league ah” iyada oo waliba si toos ah fariintan loogu diray Liverpool oo lagu menshangareeyay bartooda twitterka.
Halkan ka eeg hambalyada ay Barcelona u dirtay kooxdii Champions League sida xun uga soo reebtay ee Liverpool.
Jurgen Klopp ayaa xaqiijiyay in Pep Guardiola uu ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay ee sida tooska ah telefoon uga soo wacay si uu ugu hambalyeeyay UEFA Champions league waxaana sidoo kale jira dad badan oo magac leh oo Reds guushii ay xalay gaadhay ugu hambalyeeyay.
Kooxda Tottenham ayaan iyaduna wax hambalyo ah u dirin Liverpool iyaga oo ku mashquulay in ay taageerayaashooda u mahad celiyaan. Kooxaha qaar ka mid ah ayaa marka ay guuldaraystaan kooxda koobka ku guulaysata u hambaleeyay balse Spurs ayaa markeeda ka quustay.
Ciyaartoyda iyo shaqaalaha kooxda Liverpool ayaa dib ugu soo laabanaya magaalada Liverpool halkaas oo la qorsheeyay in uu ka dhici doono dabaal degii ugu waynaa ee isku soo baxa baska koobka la saari doono.